Akwụkwọ Larry Alton na Martech Zone |
Edemede site na Larry Alton
Fraịdee, Nọvemba 8, 2013 Larry Alton
O doro anya na hasntanetị agbanweela n'ụzọ dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ, nke ahụ bụ eziokwu maka otu ụlọ ọrụ si azụ ahịa azụmaahịa ha n'ịntanetị. Onye ọ bụla nwere azụmaahịa chọrọ naanị ileba anya na ọnụọgụ mgbanwe Google mere na nyocha algorithm ya iji nweta nghọta bụ isi banyere etu esi ere ahịa ntanetị agbanweela oge. Lọ ọrụ na-azụ ahịa na ịntanetị kwesịrị ịkwado atụmatụ azụmaahịa ha oge ọ bụla enwere mgbanwe
Monday, October 7, 2013 Wednesday, December 17, 2014 Larry Alton
Ngwaọrụ kachasị mma maka ịntanetị na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Iji mee ka oge ndị a guzosie ike, ịkwesịrị idobe ntị gị n'ala, bulie ngwaọrụ ọhụụ na nke kachasị dị irè maka ụlọ ndị na-ege ntị na ntụgharị okporo ụzọ. Atụmatụ ịde blọgụ SEO gosipụtara mkpa nke ọdịnaya "ọcha okpu" na ịkekọrịta, n'ihi ya ị nwere ike ịkwalite blọgụ azụmahịa, ikike weebụsaịtị, na Twitter iji wuo aha gị dijitalụ. Ngwa ntanetị dị n'etiti na-arụ ọrụ ugbu a
Na ngwụcha August, Matt Cutts kọwara na Google na-elele ọsọ ọsọ saịtị dị ka ihe dị na ebe nrụọrụ weebụ na-egosi na peeji nsonaazụ ọchụchọ. N'ime vidio Enyemaka Webmaster ya, o kwuru, sị: “Ọ bụrụ na saịtị gị dị nwayọ n'ezie, anyị ekwuola na anyị na-eji ọsọ ọsọ na ogo ogo anyị. Yabụ na ihe niile ha nhata, ee, saịtị nwere ike ịdị ala. “Ugbu a, anyị anaghị ekwu okwu banyere ihe dị iche iche
Tọzdee, Septemba 19, 2013 Wednesday, December 17, 2014 Larry Alton
Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe niile ị gụrụ, ịmalite weebụsaịtị iji nweta ego ga-efu efu ụbọchị ndị a. Ndị kwadoro asambodo ọnwụ ahụ na-ata oke asọmpi na mmelite Google dị ka ihe kpatara ọdịnala ọdịnala ọdịnala, site na azụmaahịa mgbakwunye, abụkwaghị isi iyi nwere ike ịme ego. Agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile natara akwụkwọ ozi ahụ. N'ezie, a ka nwere ọtụtụ ndị mmadụ na weebụ ndị